Feed pelletizer mills ကိုတစ်ခါတစ်ရံ pellet press ဟုလည်းညွှန်းလေ့ရှိသည်, အဓိကအားဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောအစာကျွေးသောကောက်ပဲသီးနှံများမှတိရိစ္ဆာန်အစာများအပါအ ၀ င်တိရိစ္ဆာန်အစာအတွက်လုံးလေးများထုတ်လုပ်သည် (ကျောက်စိမ်း, မုယောစပါး, ပြောင်းဖူး, malt, Oats, ပဲပုပ်, စသည်တို့). Feed pellet mills များသည်အရွယ်အစားနှင့်ဒီဇိုင်းကွဲပြားမှုရှိသည်, အဓိကအားဖြင့်ပြားချပ်ချပ်သေကျွေးသောအစာတောင့်စက်အပါအဝင် အစာကျွေး pellet ကြိတ်စက်လက်စွပ်. အတောင့်ကြိတ်စက်တစ်လုံးလျှင်လုံးတောင့်များထုတ်လုပ်မှုသည်ကွဲပြားနိုင်သည် 80 တစ်နာရီလျှင်ကီလိုဂရမ်9တစ်နာရီလျှင်တန်ချိန်။ ရောင်းရန်ဤကျွေးမွေးသောအစာတောင့်စက်သည်ယုန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်, ငါး, ကြက်သား , ဝက်, သိုး, ကျွဲနွားကျက်စားစက်ရုံ. ရောင်းရန်အတွက်အစာတောင့်စက်သည်အထူးသဖြင့်အိမ်ထောင်စုများအတွက်စျေးနှုန်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ,အသေးစားနှင့်အလတ်စားမွေးမြူရေးခြံနှင့်ပေါ့ပါးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများ, နှင့်ရောင်းအားအတွက်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်ကိုစီးပွားရေးထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန် ဦး စားပေးမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်.
ဒီကြက်ဘဲအစာတောင့်အဘို့အကုန်ကြမ်းလည်းပြောင်းဖူးမုန့်ညက်ကဲ့သို့အလွန်လေ့ရရှိနိုင်ပါသည်,ဆန်ခွံ,ကောက်ရိုးစာ,မြက်မုန့်ညက် ,alfalfa etc.as ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်ထုတ်လုပ်သူ,ကျနော်တို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုပေးပါ,အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်,နှင့်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှု,ကျွန်ုပ်တို့သည်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်ကို ၃၀ ကီလိုဂရမ်မှတစ်နာရီအထိထုတ်လုပ်နိုင်သည် 1500 ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်မှာကီလိုဂရမ် / h.,ကျွန်ုပ်တို့၏အစာတောင့်စက်ကိုဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်မော်တာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သေးငယ်သည့်ကြက်မွေးမြူရေးခြံသို့မဟုတ်အိမ်သုံးအတွက်ဤကြက်ဘဲအစာတောင့်သည်အခြားနှင့်ကွဲပြားသည် တောင့်စက်များကိုကျွေးမွေးပါ. ကြက်သားသည်, သူတို့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုအတွက်ထားရှိမည်. ကြက်သားအစာသည်အာဟာရပါဝင်မှုနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအလေးထားသင့်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအိမ်လုပ်ကြက်သားအစာတောင့်ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးအာဟာရနှင့်အာဟာရပြည့်ဝမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်အာရုံစိုက်ပြီးကြက်သားသည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုများပြားရန်. ထို့အပြင်ဘာလဲ, ကွဲပြားခြားနားသောကြီးထွားလာအဆင့်ဆင့်အတွက်ကြက်သားကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား feed ကိုလုံးလေးများလိုအပ်သည်, ဒီစက်နဲ့, သငျသညျမှအစာကျွေးလုံးလေးများစေနိုင်သည် 2-10 မီလီမီတာ, ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တွေ့ဆုံ.
Electric Portable Feed Pellet Mill ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများ
1. လျှပ်စစ်မော်တာများကမောင်းနှင်, စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း .
2. ပြားချပ်ချပ်လုံးတောင့်ကြိတ်စက်သည် ၀ တ်ဆင်မှုဒဏ်ခံနိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသက်တမ်းကြာရှည်သည်
3. ပြောင်းလဲနိုင်သောဖိအားသည် roller ၏ဖိအားကိုသာတိုးတက်စေသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းရှည်.
4. အဆိုပါလုံးလေးများလုပ်ငန်းစဉ်မြင်နိုင်သည်, ဒါကြောင့်သင် pelleting အခန်းကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက် pelleting ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်.
5. လျှပ်စစ်အစာကျွေးပြီးသေတ္တာလုံးသည်အစိုင်အခဲအမျိုးမျိုးကိုကြက်သားကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အစာတောင့်ငယ်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်, ယုန်, ဝက်, စသည်တို့.
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, ၏တိုးတက်မှု ခရီးဆောင် feed ကို pelletizer လူ့ဘ ၀ ကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်. လယ်သမားများသည်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ရရှိနိုင်သည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာကြိတ်စက် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို feed ကိုလုံးလေးများအောင်သည်. ၎င်းသည်တောင်သူလယ်သမားများအားအစေ့အမျိုးမျိုးကိုအစာတောင့်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ကူညီသည်. တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်, ဒီဒီဇယ်ကြက်ဘဲအစာတောင့်သည်လုံလောက်သောအစာကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်သင့်အားဘတ်ဂျက်များစွာသက်သာစေသည်, သို့သော်ကြက်၊ ဘဲနှင့်ထိရောက်စွာအရှိန်မြှင့ ်၍ ကြက်၊. ထို့ကြောင့်များစွာသောလယ်သမားများသည်ကိုယ်ပိုင်အစာကျွေးခြင်းများပြုလုပ်ရန်သယ်ဆောင်နိုင်သောကြက်အစာတောင့်ကိုရွေးချယ်ကြသည်.
Feed Pelletizer ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအရည်အသွေး
ဘယ်အချိန်မှာတိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းစက်အလုပ်လုပ်တယ်, ကြိတ်စက်များနှင့်ပြားချပ်ချပ်များတို့သည်ကုန်ကြမ်းများကိုအတူတကွအလုံးလေးများအဖြစ်သေတွင်းများထဲသို့ဖိအားပေးသည်. မကြာခဏမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ကြိတ်စက်များသည်သေစေတတ်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်. ဖောက်သည်အများအပြားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော roller များနှင့်ပြားချပ်ပြားများအရည်အသွေးကိုများစွာစိုးရိမ်ကြသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ roller နှင့် flat die များသည်အသုံးပြုမှုသက်တမ်းကိုကြာရှည်စေရန်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်. ပြားချပ်ချပ်များနှင့် roller များအားအပူပေးမှုကြောင့်သူတို့၏မျက်နှာပြင်သည်ဓာတ်တိုးလွယ်ကူခြင်းမရှိချေ. ထို့အပြင်, ကျွန်ုပ်တို့၏ roller ပုံသဏ္constructionာန်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးသည်ပစ္စည်းများ၏လျှောကျခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဥတုအတွက်မျက်နှာပြင်ချောမွေ့စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. ငါတို့သည်လည်းပရီမီယံကြိတ်စက်ပေးနှင့် ပြားချပ်ချပ်သေ သင်၏ရွေးချယ်မှုအတွက်အပေါက်အမျိုးမျိုးရှိသည်.
VTKLP125350~ ၈၀ 320 0.66*0.32*0.68